Abakhiqizi be-PES nabaphakeli - China PES Factory
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-PES elishisayo lephaneli le-aluminium
I-HD112 umkhiqizo owenziwe nge-polyester. Le modeli ingenziwa ngephepha noma ngaphandle kwephepha. Imvamisa kuvame ukusetshenziselwa ukumboza i-aluminium tube noma iphaneli. Sikwenza kube ububanzi obujwayelekile obungu-1m, obunye ububanzi kufanele benziwe ngendlela oyifisayo. Kunezinhlobo eziningi zokufaka isicelo zalesi sici. I-HD112 iyasetshenziswa ...
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-PES
It is modified polyester material made product ngephepha likhishwe. Inendawo encibilikayo esuka ku-47-70 ℃, ububanzi obuyi-1m obulungele izinto zezicathulo, okokugqoka, okokuhlobisa Izithuthi, izindwangu zasekhaya neminye imikhakha, njengebheji yokuhlobisa. Lena compolymer entsha impahla ukuthi ba ongaphakeme ...
I-PES eshisayo yokuncibilika kwesitayela sefilimu
Le ncazelo ifana ne-114B. Umehluko ukuthi unezinkomba ezahlukahlukene zokuncibilika nokuncibilika. Lesi sinesimo esiphakeme sokuncibilika. Amakhasimende angakhetha imodeli efanelekile ngokuya ngezidingo zawo zenqubo nezinhlobonhlobo zekhwalithi yezindwangu. Ngaphezu kwalokho, singakwazi c ...
Ifilimu le-PES elishisayo lokunamathisela elishisayo
Lokhu yi-omentum eyenziwe nge-PES. Inesakhiwo esiminyene kakhulu semeshi, esivumela ukuthi ithole ukuphefumula okuhle. Uma ihlanganiswe nendwangu, ingacabangela amandla okubopha kanye nokungena komoya komkhiqizo. Kuvame ukusetshenziselwa eminye imikhiqizo edinga umoya ophakeme kakhulu ...